दिनेश दिपु सुवेदी print
‘के छ पत्रकारजी! यसपालि दसैं यतै (सदरमुकाम) कि कता हो?'
कुनै कार्यालयका प्रमुख सोधे।
‘पत्रकारज्यू घरतिर कहिले?'
साँझपख सानो अँध्यारो डेरामा पुग्दा छोरा कराउँछ, ‘स्कूल विदा भो। अब घर जाने।' ‘साँच्ची घर कहिले जाने बाबा?' छोरी कमिजको बाहुला तान्छे। त्यसपछि श्रीमतीको पालो आयोः
‘भोलि त बजार जानु छ है। नानीबाबूलाई केही किनेको छैन। म पनि रित्तै छु। यसपटक त बहिनीलाई नि एक जोर किनिदिनु छ। पोहर उसले कति राम्रो कपडा ल्याइदिएकी। आमा (सासू) लाई झन दुई वर्ष भो केही किनिदिएको छैन। नानी (नन्द) लाई पनि किन्नु छ।'
पिसाबले च्यापेको थिएन सायद। ट्वाईलेट छिरेर खल्ती छामेको ९ सय ७० रुपैयाँ।
‘ला ए बूढो, ग्यास सकियो। दालमा सिठ्ठी नि लाको छैन।'
आउँदैगरेको पिसाब आफै वन्द भो उसको।
काम गरेको ठाउँबाट पैसो नझरेको कति भो भनेर के हिसाब गर्नु? सुरु गरेको वर्ष जति भयो, पारिश्रमिक नपाएको पनि त्यत्ति नै भयो। काठमाडाँैको अफिसमा फोन गर्‍यो भने भन्छन्ः ‘हामीले त होइन। यहाँहरूको म्यानेजमेन्ट त क्षेत्रले गर्छ। उतै कुरा गरौँ है।'
हेलो भनी नसक्दै ‘साथी दशैको विज्ञापन कति उठ्यो यार? केन्द्रले एक सुको हाल्दैन। त्यतैबाट म्यानेज गर भन्छ। ल है ल विज्ञापन तानौँ। अलिअलि हामीलाई पनि हेर्नुपर्छ, यस पटक त।'
७ वर्षदेखि हरेक वर्षको दसैँमा सुनिने वाक्य।
उसले न दसैँमा विज्ञापन माग्यो कतै, न त नयाँ वर्षमा। एक पटक प्रयास गर्न एउटा विकासे अ छिरेको थियोः ‘यार पत्रकारजी छलफल चलाउनु पर्‍यो। स्थानीय पत्रीकाको विज्ञापनले ध्वस्तै बनायो।' हाकिमले हात मिलाई नसक्दै भने। त्यसपछि विज्ञापनको भुतले तर्साएको पनि ४ वर्ष भयो।
केही महिनाअघि ‘ल साथी जिल्लाले तताउनु पर्‍यो। तलब खान नपाएर बिजोग भो। यसो उता (जिल्ला) बाट पेलौँ, हामी यतावाट सपोर्ट गछर्ौँ।'
आफ्नै कार्यालयको पत्रकार महासंघ शाखाबाट कसैले फोन गर्‍यो। आशाको त्यान्द्रो पनि टुट्यो, केही बर्षअघि।
कोठाभाडा नतिरेको आधा वर्ष भएछ। धन्न घरबेटीले २ पटक मात्र सम्झाएका छन्। दुधको पनि ४ महिनाको तिर्नु छ। रासन, छोराछोरीको स्कुल फिस, होटलको खाजा, पोहर जुत्ता किन्दाको। यताउता हिसाब गर्दा तिर्न बाँकी नै छ, करिब करिब आधा लाख।
छोराबुहारी अझ बोर्डिङ पढ्ने नातिनातिनी आउलान् भनेर दङ्ग छन् वा आमा पनि। भाइले दाइ आउला र मासु खाउला भनेर कुरेको माघे सक्रान्तिदेखि हो।
९ सय ७० गोजीमा। सबै सबै सोच्दै पसल पुग्यो, उधारो ग्यासको खोजीमा। कुनै जुगाड चलेन।
कोठामा आयो। होटलमा जानुको विकल्प थिएन। श्रीमती, छोराछोरी टिप्यो अनि आजको खाना होटलमा।
‘साहुजी चार ठाउँमा खाना है। दुई हाफ।'
बखाना लिएर आएको भाइले खाना टेबलमा नराख्दै बोल्यो, ‘सर मासु ल्याउँ?'
छोराछोरी संँगै बोले, ‘खाने खाने।' तुरुन्तै आयो मासु।
श्रीमती र छोराछोरीले मिठो मुखले मासु खाएको हेर्‍यो। आफूलाई खाना त के मासु नि नमिठो लागिरह्यो। आँखाभित्रको आँसु दबाएर आफैलाई धिक्कार्‍यो।
‘साहुजी कति भो?'
‘हजार ४० भो। हजार दिनु न।'
ला खल्तीमा ९ सय ७० मात्र छ। ९ सय दियो।
‘सय भोलि है।'
अँध्यारो अनुहार लगाएर साहुले स्वीकृति दियो। अब त्यो सय नआउने प्रायः निस्चित छ।
कोठामा आयो। टन्न पेट भरेका श्रीमती र छोराछोरी मस्तले निदाए। सिरानी भित्तामा ठडायो उसले। अनि अडेस लागेर गम्योः कसरी मनाउने दसँै?
‘हे भगवान, कसैले बच्चा जन्माएर सुत्का पर्न पाए नि हुन्थ्यो।'
अझ आत्माको कुनामा ‘जुठो'सम्मको सोँच्ा।
पोहर भन्दा ढिलै भए नि आएरै छोड्यो यसपालिको दसैँ। हर्षोल्लासको चाड। सानोमा सुनेको नयाँ कपडा, मिठो खानासंँगै रमाउने चाड।
कतैकतै सुनिन्थ्योः ‘हुनेलाई दसैँ नहुनेलाई दशा।'
यही दशाको बीचमा आउँछ सधैँ पत्रकारको दसँै।
राजधानीहुँदै जिल्लास्तरमा बसेर चौबीसै घण्टा दौडधुपमा व्यस्त पत्रकार अनि तिनको दसैँबारे सधैँ सबै मौन।
धेरै त थाहा छैन, धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र अहिलेका महेन्द्र बिष्टले भोट माग्दै गर्दा खोकेका आश्वासनका मिठाभित्रका नमिठा वाक्य अहिले पनि धेरैको कानमा गुञ्जिरहेको छ।
सबैलाई सबै थाहा छ। भोग्ने त भोग्ने नै भो। भोगाउनेहरुको मनमा ‘हरि जागे पो' केही हुन्थ्यो। पत्रकार हकहितका लागि खुलेको एकमात्र छाता संगठन नै निर्धाे र स्वार्थी बनेपछि पार्टी निकट संगठनलाई झन के चासो।
पछिल्लो समयमा सबै भन्दा बढी विकास भएको भनिएको संचार। सबैभन्दा बढी सामन्त्ाी र नियमनहीन छ भन्दा केको अन्याय?
आइतबार, कार्तिक १, २०७२ १३:०५:१७